I-Photoshop CC yahlula i-Adobe MAX ngezixhobo ezibini eziMangalisayo | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Amanqaku amabini amatsha kwiFotohop CC kwiAdobe MAX
UManuel Ramirez | | Photoshop, Ezahlukeneyo
Izolo sele sityhile iindaba ezininzi ezinxulumene ne-Adobe MAX, umsitho wenkampani ekhokelayo kuyilo kunye nokuhlela kusetyenziswa ikhompyuter okanye isixhobo esiphathwayo. Baye bazazisa Ezona zinto zimbini zibalulekileyo kwiFotohop CC.
Kwelinye icala sinesixhobo sokhetho seAdobe Sensei, esihambelana nobukrelekrele bokuzenzela, kunye Iindlela zokudibanisa eziPhila okanye eziPhila. Izixhobo ezibini ezitsha zokunika amaphiko kubo bonke abo banini babhaliso lwenyanga lweAdobe Photoshop CC.
Izolo besithetha ngePremier Rush, njenge-app entsha enikezelwe kwividiyo, kunye nokukhawuleza ukufika kweAdobe Photoshop CC (ewe, inguqulelo epheleleyo yePC) yee-iPads; nangona zonke iimpawu zayo baya kufika kuhlaziyo oluchaphazelekayo.
Ngaphambi kokuthetha malunga neencwadana ezimbini ezinkulu, sinokuphinda sitsho ukuba ngoku unako cofa kabini kwisicatshulwa ukuyihlela kwaye usebenzise isixhobo sokubhaliweyo ukwenza uhlengahlengiso. Nokuba isikali esinikiweyo sikhona ngokungagqibekanga, okanye unokucima ngokuqhubekekayo ngaphandle kokubamba ukhetho okanye amaqhosha oshift ayafumaneka.
Ngokubhekisele kwiAdobe Sensei, iAdobe ubonise oko ngonqakrazo olunye, entsha isixhobo sokhetho seSensei Inokubhaqa ngokuzenzekelayo into esiyifunayo. Oko kukuthi, sicofa ibhere kunye nemilo yayo yonke ikhethwe ngokupheleleyo.
Esinye sezixhobo ezothusayo ziindlela zokudibanisa eziphilayo ezibonisiweyo kwiAdobe MAX yeFotohop CC. Kuphela nge shiya isikhombisi semouse kwezinye zeendlela fusion kunye nendlela ehlaziywe ngayo ngexesha lokwenyani, ikwazile ukuphumelela ihlombe loluntu olukhoyo.
Injongo ye uhlaziyo olutsha lweAdobe Photoshop CC kukuthatha ubuchule ukuya kwelinye inqanaba kwaye ugcine ixesha lomsebenzi kwimisebenzi yokhetho enjengeAdobe Sensei bliss. Ngoku ifuna ukufika.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » Izixhobo zoYilo » Photoshop » Amanqaku amabini amatsha kwiFotohop CC kwiAdobe MAX
I-Apple inika i-bagel emoji i-twist ukukholisa abagxeki